Isiokwu nke Chris Rothstein na Martech Zone |
Edemede site na Chris Rothstein
Chris Rothstein bụ onye isi na ngalaba-onye guzobere Groove.co, a ahịa njikọ aka ikpo okwu. Tupu Groove.co, Chris wuru, bulie ma jikwaa ndị otu azụmaahịa na Google. Ugbu a ọ na - enyere aka iweta teknụzụ ọgbara ọhụrụ na ụwa ahịa ka onye ọ bụla site na ahịa ahịa na ndị na - ahụ maka ịre ahịa nwere ike iwepụtakwu oge iji nye ndị ahịa ha uru na ụlọ ọrụ ha.
Akaụntụ Dabere Ahịa Strategy bụ Ọdịnihu, na Groove dị ebe a maka ya
N'ihe banyere ire software SaaS, ichota ndi mmadu abughi ihe omuma nke oru. A sị ka e kwuwe, nkezi nke ndị mmadụ 5.4 na-etinye aka na mkpebi ire ere otu ụlọ ọrụ. N'iburu na vetting dabeere na otu ahụ bụ ụkpụrụ, ahịa ahịa (ABS) na-arụpụta ihe karịa ị na-achọ nduzi ụfọdụ. Thezọ dabeere na akaụntụ ahụ maka ire ere, na-eri oge. Na-enyocha usoro ihe omimi na usoro iheomume gafere ọtụtụ ebumnuche, yana ịmekọrịta na ozi ahụ n'ofe ndị otu,